थपिए ८ मन्त्री, कसले कुन मन्त्रालय पाए ? | नेपाल इटाली डट कम
थपिए ८ मन्त्री, कसले कुन मन्त्रालय पाए ?
March 19, 2013 — nepalitaly
५ चैत, काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार पूर्णता पाएको छ ।
« रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि
रोम समाजको कार्यसमितिको लागि भोलि आइतबार निर्बाचन हुने »